Izindaba - Ngokuthuthuka okuqhubekayo kobuchwepheshe be-CNC, imboni yemishini ye-CNC yaseChina iye yangena kancane kancane ekuguqulweni
Ngokuhlukaniswa kwezimfuno zezimakethe kanye nokuthuthuka okuqhubekayo kobuchwepheshe be-CNC, imboni yemishini ye-CNC yaseChina iye yangena kancane kancane esikhathini esibalulekile semibono yokushintsha, izinguquko emakethe yokuthengwa nokufunwa, isivinini sokuvuselelwa komkhiqizo nezinye izici sezizongenisa ushintsho olukhulu. Izimpawu zakho konke lokhu zikhomba ukuthi kuzofika umzuliswano omusha wokushwiba.
Njengoba sonke sazi, i-Guangdong okwamanje ingenye yezisekelo ezinkulu zokukhiqiza imishini ye-CNC ezweni futhi nasemhlabeni wonke. Izinhlobo zifaka phakathi imishini ye-CNC, imishini yokubhoboza i-CNC, imishini yokusika i-CNC, izikhungo zemishini neminye imikhiqizo. Kodwa-ke, ngenxa yezithiyo eziphansi zokungena embonini, kunenani elikhulu labakhiqizi abancane Amashabhu amancane ahlanganisiwe. Ukuze bancintisane ngemakethe, abakhiqizi bemishini abaningi baseGuangdong CNC baxoxisana kakhulu, kepha abazinaki inani elikhulayo labakhiqizi bemishini ye-CNC kwezinye izifunda. Njengamanje, inzuzo yamanani yabakhiqizi bemishini ye-CNC eGuangdong ayiveli obala. I-Jinan eShandong, i-Anhui eNanjing, neBeijing e-Hebei Ukuvela kwabakhiqizi bemishini yokulawula izinombolo esifundeni kubambe abakhiqizi bemishini yokulawula izinombolo baseGuangdong. Futhi njengoba amazwe athuthukile eYurophu naseMelika ebuyela kwezokukhiqiza, inani elikhulu labakhiqizi abancintisana kakhulu lizovela.
Imibono emisha kanye nesivinini sokuvuselela umkhiqizo kungamandla amakhulu entuthuko yenkampani yesikhathi eside. Kodwa-ke, lokhu kudinga ukusekelwa okuqinile kwezobuchwepheshe nezimali. Imboni yemishini ye-CNC inomlando wamashumi eminyaka ambalwa ukusuka ekuveleni kwayo kuya ekuvuthweni. Imakethe yamanje nokwenziwa kokusebenza kwamakhasimende nokwethembeka kwekhwalithi kunezidingo eziphakeme, hhayi kuphela ezingasetshenziswa ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende. Kubakhiqizi abakhulu asebevele benza ukuvelela okukhulu, indlela yokunamathela kubo nokuhola ukuthuthuka komkhakha sekuyinto ebalulekile. Njengoba ukufunwa kwemakethe kuguquka, izidingo zemisebenzi yomkhiqizo nokusebenza kwazo seziya ngokukhethekile futhi zisezingeni eliphezulu.
Uchungechunge lwemikhiqizo efana nomshini we-CNC EDM, umshini wokushaya isibhakela we-CNC, umshini wokusika wocingo we-CNC, isikhungo semishini neminye imikhiqizo edayiswa yi-Dongguan Bica ihlale ibonakala emakethe ngenxa yezinzuzo zayo zemisebenzi eminingi nokusebenza kwezindleko eziphezulu. Isinyathelo esilandelayo ukuvuselela imboni. Njengokulawulwa kwamanani (i-CNC) kwamabhizinisi nemishini yokusebenza, iDongguan City BiGa Grating Machinery CO., LTD. kuzothembela emandleni amakhulu enkampani okucwaninga nentuthuko namandla obuchwepheshe ukukhulisa isikhala esithe xaxa emakethe.
Umshini Wokugaya we-Gantry Surface, Umshini Wokugaya we-Gantry Double Head Surface, Umshini Wokugaya we-Gantry Single-End Surface, Umshini Wokugaya we-Gantry Double-End Surface, Uhlobo lwe-Gantry Surface Grinding Machine, Umshini Wokugaya we-Gantry Single Head Surface,